Ny didy 10 momba ny fampandrosoana an-tranonkala maoderina | Martech Zone
Ny didy 10 momba ny fampandrosoana amin'ny Internet maoderina
Alakamisy Febroary 15, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Ny serasera dia manan-danja amin'ny maha-Product Manager miaraka amina orinasa rindrambaiko iray. Vao tsy ela akory izay, niasa sy namoaka ireto "baiko" manaraka ireto momba ny fampandrosoana tranonkala maoderina hozaraina amin'ireo ekipanay izahay. Ny mpanamboatra tranokala maoderina (na ny fampiharana) dia tokony hanaraka ireo didy folo ireo.
Misy ny maniry teny fandaharana izay azo hariana ivelany noho ireo rehetra ireo; na izany aza, ny tanjoko dia ny hametraka ireo amin'ny teny iraisana izay mety ho takatry ny matihanin'ny rindrambaiko (ary na ianao) aza.
Tohano hatrany ny 99% n'ny mpampiasa Internet, na inona na inona browser, kinova fanaova na rafi-pitantanana. Amboary araka izany ary miomàna foana amin'ny famoahana beta.
Mampiasà kaody manara-penitra XHTML ho an'ny fampiharana hatrany, fanovozan-kevitra avy amin'ny takelaka Cascading Style mifanaraka amin'ny DTD sy ny cross-browser ho an'ny fomba fanao sy ny sary fampiharana rehetra.
Miresaha lahatsoratra sy tadiny foana amin'ny alàlan'ny singa fanovozan-kevitra manohana ny karazana endri-tsoratra ary tsy mila fananganana velively.
Miresaha daty sy fotoana ao amin'ny GMT izay ahafahan'ny mpampiasa manova ny vokatra araka izay tadiavin'izy ireo.
Manangana singa fampidirana hatrany amin'ny endri-javatra rehetra.
Miorena hatrany amin'ny fenitry ny RFC (mailaka an-tsoratra, mailaka HTML, adiresy mailaka, referansa domain sns.)
Manamboara modular foana. Raha misy safidy mihoatra ny iray na aiza na aiza amin'ny fampiharana dia tokony ho afaka manampy bebe kokoa ianao raha tsy mitaky fananganana.
Raha mihoatra ny ampahany amin'ny fampiharana no manao izany, ny ampahany rehetra amin'ilay rindranasa dia tsy maintsy manondro teboka tokana.
Aza averina ampiasaina intsony izay azonao vidiana ary amboary hatrany ny fampiharana anay hanohanana ny zavatra novidinao.
Raha mahavita azy ny mpampiasa dia manohana azy izahay. Raha tsy tokony hataon'izy ireo izany dia tsy maintsy manamarina izany isika.
Inona no hividy ny Geek izay manana ny zava-drehetra?
Microsoft dia mamoaka ny Outlook 2007 FAQ re: HTML Support
17 Feb 2007 tamin'ny 5:54 maraina
Nanaiky. Na izany aza, mifototra amin'ny teboka 7. Mino aho fa na dia amin'ny fampivoarana tranonkala aza, ny angona, ny fanehoana (GUI'S) ary ny lojikan'ny fandraharahana dia tokony hisaraka hatrany amin'ny fomba MVC mifototra amin'ny modely.
Hitombo izany, ny kalitaon'ny rindrambaiko ary ny scalability.
Febroary 17, 2007 amin'ny 1:50 PM
Misaotra, Andreas! Tena izany no toe-tsain'ny #7 - ny doka fanehoan-kevitrao dia mazava kokoa.